သေးဆူလဲကျေးရွာအတွင်းရိက္ခာပြန်ယူသောရွာသားတစ်ဦးစစ်တပ်မှထောင်ထားခဲ့သော မိုင်းနင်းမိပြီး ခြေတစ်ဖက်ပြတ် - Myanmar Pressphoto Agency
Karenni MPA Myanmar News
News September 29, 2021 ·0Comment
ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်းရှိသေးဆူးလဲကျေးရွာမှကျေးရွာသားတစ်ဦးသည်စက်တင်ဘာလ၂၈ရက်ညနေပိုင်းတွင်စစ်ရှောင်နေရာမှ ရိက္ခာလိုအပ်ချက်ကြောင့်ရွာထဲသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရာတွင် စစ်တပ်ကထောင်ထားခဲ့သောမိုင်းကိုနင်းမိပြီး ခြေတစ်ဖက်ပြတ်ခဲ့ရသည်။
စက်တင်ဘာလ၂၆ရက်နေ့က ကုန်းသာရွာနှင့်သေးဆူလဲကျေးရွာတို့တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအထိအခိုက်များစွာဖြင့်တပ်ဆုတ်ခဲ့ရသောအကြမ်းဖက်စစ်တပ်သည်ရွာအတွင်းမိုင်းများထောင်ထားခဲ့ပြီး၎င်းတို့ထောင်ထားခဲ့သည့် မိုင်းကိုနင်းမိပြီးယခုကဲ့သို့ထိခိုက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်(KNDF)မှတာဝန်ရှိသူကဆိုသည်။
“စက်တင်ဘာ၂၈ရက်ညနေ၇နာရီ၈နာရီဝန်းကျင်မှာသေဆူးလဲကိုရိက္ခာသွားပြန်ယူတဲ့ရွာသားတစ်ဦးမိုင်းနင်းမိခဲ့တာပါ။ အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကမိုင်းထောင်ပြီးမှဆုတ်တာပေါ့။ အဲ့မိုင်းတွေကိုနင်းမိတာပေါ့။”ဟု၎င်းကဆိုသည်။
မိုင်းနင်းမိခဲ့သူမှာ သေးဆူလဲကျေးရွာသားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မိုင်း၏ဒဏ်ကြောင့်ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ပြီး သွေးသွင်းခြင်းများပြုလုပ်ပေးခဲ့ရသကဲ့သို့ခြေထောက်တစ်ဖက်လည်းဖြတ်ပစ်ခဲ့ရသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် သက်သာသောအနေအထားတွင်းရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
“ ခြေတစ်ဖက်ဖြတ်ထားရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်။မနေ့ညကသွေးလိုတော့ကျနော်တို့ရဲဘော်တွေသွေးလှူပေးရတယ်။လောလော ဆယ်ဆယ်တော့ အခြေအနေသက်သာတယ်လို့သိရပါတယ်” ဟု(KNDF)မှတာဝန်ရှိသူကပြောသည်။
ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် ကုန်းသာရွာတွင် စက်တင်ဘာလ၂၅ရက်နှင့် ၂၆ရက်တို့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောတိုက်ပွဲများအတွင်း အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ဒေသခံများ၏ နေအိမ်၃၀ ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည့်အပြင်ရိက္ခာများယူဆောင်သွားခြင်းနှင့်ရွာအတွင်းမိုင်းထောင်ခဲ့ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
လက်ရှိအချိန်တွင်ကလောမြို့မှချီတက်လာသည့် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်သည် ဖယ်ခုံမြို့နှင့်မိုးဗြဲမြို့တို့တွင်တပ်စခန်းချထားလျက်ရှိနေသည်။
မနေ့ညကလည်း လွိုင်ကော်တွင်ရှိသည် အမြှောက်တပ်မှဒီးမောဆိုမြို့နယ်အတွင်းသို့လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင်းလည်းလွိုင်ကော်သို့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှအင်အားထပ်မံဖြည့်တင်းမှုများပြုလုပ်လျက်ရှိနေသည်။
#အကြမ်းဖက်စစ်တပ် #မိုင်းထောင် #ရွာသားမိုင်းနင်းမိ #MPA
Villager Lost Leg after Stepping on Military-Planted Landmine When Returning for Food to Thae Sule Village
On September 28 evening,avillager from Demoso twonship’s Thae Sule village lost one leg after stepping on landmine, planted behind by the military, when he was returning to the village for food from fleeing clashes as they had run out of food in the IDP camps.
In Konethar and Thae Sule clashes on September 26, the terrorist military had to retreat after receiving massive casualties and planted landmines in the village; and this happened after stepping on the landmine they planted behind, said one Karenni Nationalities Defense Force (KNDF) official.
“On September 28 evening at around7or 8pm,avillager who was returning to Thae Sule village for food stepped onalandmine. The terrorist military planted landmines before they retreated. So he stepped on one”, he said.
The man isaThae Sule villager and the injury was so serious that blood transfusion had to be done and one leg had to be cut off. At present, he is recovering.
“One leg was cut off. As blood was required, we (comrades) donated blood. Right now, he’s doing better”, saidaKNDF official.
In Konethar clashes of Demoso township on September 25 and 26, the terrorist military destroyed and set more than 30 houses of the local people on fire, looted houses taking away food and planted landmines behind.
Currently, the terrorist military which has come up from Kalaw town has set camps in Phekon and Mobye towns.
Yesterday, the artillery brigade from Loikaw fired shells onto Demoso township and this morning also, the terrorist military was reinforcing its troops in Loikaw.
#TerroristMilitary #PlantedMine #VillagerSteppedonLandmine #MPA